Anọ m na-agwa otu ezigbo enyi m okwu, Bob Flores, bụ onye ndu na ụlọ ọrụ Telecom. Bob na-akuzi ulo oru ndi n’edu n’ulo oru ya na ndi okacha amara n’inwe oru oma n’ime ulo oru Telecom. Bob jụrụ m n'abalị a ihe m chere na Intanet na-esote bụ nnukwu echiche. Nke a bụ ihe echiche m bụ:
Enweghi ego buru ibu na intaneti site na iwube web peeji. Internetntanetị na-agbakọta n'ime multimedia, n'oge na-adịghị anya, ọ ga-abụ ụlọ ọrụ 'USB' nke ụwa nwere ọtụtụ ijeri ọwa. Zụta nnukwu ngalaba aha na iwu saịtị nke na-eweta nde mmadụ dị ugbu a dị ka ịzụta tiketi lọtrị. Ọ bụ ihe dị ọnụ ala… ma Ohere inweta bụ na ị na-agaghị eme ka gị ego gị oge ọ bụla anya.
Ọrụ Mmekọrịta - SaaS (Software dị ka Ọrụ) na-adịwanye oke ala ụbọchị ndị a. Naanị ụlọ ọrụ SaaS buru ibu ga-enwe ike ịlanarị ka oke uru na-ebelata. Companieslọ ọrụ ndị a ga-enwerịrị ike ịbawanye ụba ma gaa n'ihu na-ewulite arụmọrụ na ihu mmemme mmemme zuru oke (API) ma ọ bụ njikọta ọdịnaya (RSS). Nke ahụ pụtara na ezigbo ego dị na ikike ijikọ ọrụ ndị ahụ ma ọ bụ ọdịnaya na sistemụ ndị ọzọ maka ngwa ọdịnala. Lelee ederede dị n'elu na ihe ịma aka nke Web Semantic ị ga-amalite ịmata ihe kpatara ịbanye na ụlọ ọrụ ọrụ njikọta ga-abụ ezigbo agagharị! Enwere ọtụtụ nsogbu iji merie.
Isiokwu na Mpaghara Mashups - Ike nke ịntanetị dịka usoro zuru ụwa ọnụ bụkwa adịghị ike. Ọ dị mfe ịla n’iyi ụgbụ. Ihe ga - abụwanye ihe a ma ama bụ iji Mashups mee API wee weta ọtụtụ sistemụ dị iche iche na ngwa mpaghara ma ọ bụ nke ederede. BlogginWallStreet bụ otu ihe atụ. Ezigbo ezinụlọ bụ ihe ọzọ. Enwere m enyi nke nyeere aka na mmalite Family Watchdog. M gụrụ otu isiokwu na BlogginWallStreet n'oge na-adịghị anya. Ha abụọ na-eto site na mmali na oke. Lee MashupCamp maka ihe ndị ọzọ na Mashups ma ọ bụ gụọ David Berlind na ZDNet.
Mmekọrịta Retail / eCommerce - nke a bụ ngwakọta nke # 1 na # 2 mana m na-ahụ n'ezie ohere buru ibu iji zụlite ahịa site na iji web. Cheedị banyere ụlọ ahịa dị na mpaghara na-ezitere gị ozi nkeonwe gị na coupon ị nwere ike ịdaba na ụlọ ahịa mpaghara. Lọ ahịa ahụ maara na ị nwetara onyinye ahụ ma na-atụ anya ka ị. Nke a dị obere karịa nkwukọrịta mgbasa ozi na mbọ ire ahịa nke ụlọ ọrụ ndị na-anwa iji ahịa ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ nweta gị na ụlọ ahịa mpaghara. Ọ bụ mpaghara, ọ jikọtara ọnụ, ọ bụkwa nke onwe.
Tags: ịzụ ahịadavid berlindmwekotasaassiri ike nghọta webelekọta mmadụ media2.0 webUgbok